Izixhobo zokususa iphepha lodonga
Izixhobo eziyimfuneko zokususa iphepha lodonga ziya kwahluka ngokuxhomekeka kwinkqubo oyikhethileyo yokususa. Uya kudinga izinto ezimbalwa kuphela kwaye ususe iphepha lodonga.
Isitshixo seRazor : Esi sixhobo sokuchwetheza iphepha-lodonga (malunga ne-intshi ezi-3 ukuya kwezi-4 ububanzi) kujongeka ngathi yimela ye-putty kodwa ine-slot yeebhleyitha ezinokutshintshwa ukuze uhlale unomphetho obukhali.
Iphepha lodonga lesitshixo linomphetho obukhali wokukunceda ungene ngaphantsi komphetho wephepha lodonga.
Isishicileli sephepha : Le gadget intle inokukrola kunye nokugqobhoza iphepha lodonga elisetyenziswe kwi-drywall. Inesiphatho esingqukuva, esifana neqhina esiqhotyoshelwe kwincakuba ekrwela okusika iphepha. Isinyibilikisi okanye umphunga emva koko unokungena kungcina yokuncamathela kodwa awunakonakalisa iphepha elomileyo elijongene nalo.
Iphepha lodonga elibukhali umphezulu wephepha lodonga ukuze izinyibilikisi zingene phantsi komaleko wephepha lodonga.
Iphepha lodonga : Qeshisa enye (okanye uthenge imodeli yokwenza ngokwakho ukuba uthenge i-fixer-upper!) Ukuhambisa iphepha lodonga kwiindonga zakho.
I-steamer yephepha lodonga ilungile ekususeni izaleko ezininzi zephepha lodonga okanye iphepha elipeyintwe ngaphezulu.
Olunye unikezelo lokususa iphepha lodonga
Isinyibilikisi sokususa iphepha lodonga : Nangona amanzi afudumeleyo anokwenza ubuqhetseba, ungajikela kwizinyibilikisi zokususa iphepha lodonga ukuba ufuna njalo.
Fafaza ibhotile okanye ipeyinti yokurola : Sebenzisa esinye okanye zombini ezi zixhobo ukufumana isisombululo samanzi / sokususa eludongeni.
Iiplastiki kunye nelaphu lokulahla amalaphu : Ufuna zombini ezi ntlobo ukukhusela ngokwaneleyo imigangatho yakho kumanzi amdaka.
Iteyiphu ebanzi yokuthambisa : Tape amalaphu okulahla eplastikhi kwisiseko sokubumba ukunqanda ukonakalisa imigangatho yakho.
Ibhakethi lamanzi, iitawuli, amadlavu, kunye neziponji zodonga : Emva kokususa iphepha lodonga elidala, zihlambe kakuhle iindonga.
Izixhobo zeeprojekthi zephepha lodonga
Ukomisa okomileyo yinkqubo elula yokususa kwaye ifuna kuphela isitshetshe sokukhulula emaphethelweni ephepha.
Ukucwina kunye nokukhuhla
Ukucwina kunye nokukhuhla yeyona ndlela ine-messiest. Ifuna: isikhuhli sephepha, isikhuseli sodonga, ibhotile yokutshiza okanye ipeyinti yokuyifaka kunye nephepha lodonga.
Ukuxhoma iphepha lodonga
Sebenzisa i-steamer yephepha lodonga yiprojekthi enkulu, kodwa iyasebenza kakhulu kwiphepha elinenkani. Uya kudinga isitshisi sephepha, iphepha lodonga, ipani yokubhaka (ukubamba umphunga xa ungayibambi), kunye nephepha lodonga lokucheba. Ukuzikhusela, kufuneka uneiglavu zerabha kunye nehempe enemikhono emide.
yintoni abilile ye
ukufumanisa njani uhlobo lomhlaba
ungathatha i-excedrin ngelixa uncancisa